Sidee Loogu Wareejiyaa WordPress Pantheon | Martech Zone
Sida loo geeyo WordPress-ka Pantheon
Talaado, Nofeembar 21, 2017 Andrew Taylor
Websaydhka shirkaddaadu waa mid ka mid ah hantida ganacsi ee ugu qiimaha badan. Waqtiga xaddidan, helitaanka, iyo waxqabadka ayaa si toos ah u saameyn kara khadkaaga hoose. Haddii bartaadu horay uga sii socoto WordPress-tahniyadaha! —Waxaad ku fiicantahay jidkaaga si aad ugu keento khibrad aan xuduud lahayn isticmaaleyaashaada iyo kooxdaada.
In kasta oo la dooranayo CMS saxda ah waa tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah ee lagu dhisayo khibrad dijitaal ah oo cabsi leh. Xulashada martigeliyaha saxda ah ee CMS-kan wuxuu kobcin karaa waxqabadka, hagaajinta waqtiga, wuxuu yareyn karaa waqtiga horumarka, wuxuuna bixin karaa taageero muhiim ah.
Qiimaha WordPress ee Pantheon
Pantheon waa a la qabsaday WordPress martigelinta barxad bixisa xawaaraha iyo waxqabadka aad u baahan tahay inaad u rogto adeegsadayaasha hoggaamiyeyaasha. Si ka duwan inta badan bixiyeyaasha martigelinta WordPress ee isticmaala serverka ama mashiinnada farsamada, Pantheon wuxuu ku shaqeeyaa kaabayaasha ku saleysan weelka. Kunteenarada waxay leeyihiin faa iidooyin dhowr ah, oo ay kujiraan bixinta dhaqsaha leh, helitaanka sare, miisaan sare, iyo waxqabad wanaagsan.
Marka lagu daro jarista kaabayaasha, goobaha Pantheon waxay leeyihiin PHP 7 asal ahaan, lacag la'aan lagu maareeyo HTTPS, kaydinta bogga oo buuxa, iyo a CDN Global- waxqabadka ugu sarreeya ee sanduuqa gudihiisa. Ma aha in la xuso kuweenna habka shaqada ugu fiican in horumariyayaashu jecel yihiin.
Isku-darka isku-dhafan ee dhagaxan-adag iyo qalab loogu talagalay abuurayaasha goobta ayaa dejiya Pantheon marka laga reebo tartanka. Barxadda ayaa loo habeeyay inay maamusho boggaga WordPress heer aan caadi ahayn.
Bilaabidda WordPress on Pantheon
Qaabka qiimaha Pantheon ayaa kuu ogolaanaya inaad abuuro bogag sanduuqa ciidda ah bilaash ah - waxaad kaliya qorsheeysaa qorshe oo aad bilaabeysaa bixinta markaad ku darto domainkaaga caadada u ah oo aad si toos ah u noolaato. Abuuritaanka degel cusub oo WordPress ah waa fududahay, si fudud u dooro WordPress markii aad abuureysid goob cusub.
Haddii kale waxaad dooran kartaa inaad u haajiraan degel WordPress ah oo jira Pantheon. Qalabka socdaalka ayaa kugula socodsiinaya habka loo rakibo sheybaar bartaada hore, ka dib u wareejinta bogga sanduuqa ee Pantheon ayaa si toos ah u dhacaya.
Si kastaba ha noqotee waxaad si dhakhso leh oo fudud ugu tijaabin kartaa barxadda, ama bog cusub oo WordPress ah ama mid ka mid ah boggagaaga jira, bilaash. The Tilmaamaha degdegga ah ee Pantheon waxay leedahay tillaabooyin faahfaahsan haddii aad rabto inaad bog ka dhigato intaad nooshahay oo dhan.
Ka shaqeynta Pantheon
Ka dib markaad haysato bogga WordPress ee Pantheon waxaad haysataa laba ikhtiyaar oo aad ku shaqeyn karto. Habka ugu horreeya, uguna fudud, waa in si toos ah loogu saxo boggaaga WordPress Pantheon. Beddel mawduucyada, ku dar waxyaabo cusub ama ku beddel faylasha SFTP iyo git. Si kasta oo aad u shaqeysid dhammaan isbeddelada waxaa lagu hayaa xakamaynta nooca. Iyada oo faylka iyo keydinta keydka loo daryeelayo waxyaabahaaga sidoo kale ma jiraan wax laga walwalo.
Qaabka kale ee loola shaqeynayo WordPress ee Pantheon waa mid aad u adag laakiin sidoo kale aad u jilicsan oo awood leh, oo la jaanqaadaya habka aad doorbideyso inaad shaqeyso. Macnaheedu waa in laga caawiyo horumariyeyaasha inay jaangooyaan shaqadooda oo ay dhexgalaan adeegyada kale.
Qalabka korontada sida terminus si loo maareeyo Pantheon qadka amarka ama Quicksilver si loo hirgeliyo qabatooyin madal waa la heli karaa. Waxaan sidoo kale leenahay tusaalooyin horumarsan, sida qalabka dhismaha ee Terminus iyo Advanced WordPress oo ku saabsan Pantheon, isku-darka keydka Git-ka dibedda, is-dhexgalka joogtada ah, Curiyaha, iyo tijaabinta otomaatiga ah ee 'Pantheon' ee kooxaha u baahan qulqulka shaqada iyo otomaatiga.
Hore u soco oo samee Cajiib!
Pantheon wuxuu bixiyaa barxad martigelin weyn iyo sidoo kale aalado ka caawiya maareynta bartaada WordPress oo aad ku sii wadato sida ugu fiican. Waa lacag la’aan in la isku dayo ee horay u soco oo naftaada u xukun.
Saxiix Koontada Pantheon
Tags: horumarintamartigelinhaajiraan WordPresspantheonmarti gelinta wordpresshijrada wordpress
Andrew wuxuu jecel yahay u shaqeynta Pantheon caawinta hay'adaha iyo dib u siinta bulshada WordPress. Sida soo-saare web hore, Andrew wuxuu waqtigiisa ku qaatay mashaariic baaxad weyn oo loogu talagalay macaamiisha sida AMC Networks, Frito Lay, National Van Lines, iyo inbadan. In ka badan 8 sano oo waayo-aragnimo horumarinta webka ah, oo ku takhasusay WordPress, waa halyeey khibrad leh.
Ha dhayalsan Saameynta Dukaanka lebenka iyo Madaafiicda